Ibhlog yeBiohazards-US Ilungelo lokwazi
Ilungelo lase-US lokwazi ukwandisa umsebenzi walo wophando ukuya kweminye imicimbi yezempilo yoluntu engxamisekileyo, kubandakanya imvelaphi yenoveli ye-coronavirus SARS-CoV-2, ebangela isifo i-COVID-19. Singo Ukufuna iimpendulo kwimibuzo esisiseko malunga nokuba, phi kwaye kutheni le ntsholongwane iqale yabosulela abantu, kunye nolwazi malunga nokuvuza kunye nokunye ukwenzakala kwiilebhu zokutya kunye nemingcipheko yophando lomsebenzi, ejolise ekwandiseni ukubulala okanye ukosuleleka kwezifo ezosulelayo. Asazi okwangoku ukuba olu phando luza kutyhila ntoni, kodwa sikholelwa ekubeni lubalulekile ekukhuseleni impilo yoluntu ukutyhalela elubala. Ungaxhasa umsebenzi wethu ngokunikela apha.
Kule bhulogi sithumela amaxwebhu kunye nolunye uhlaziyo kuphando lwethu lwe-biohazards, olukhokelwa ngu USainath Suryanarayanan, KwiF.D. Jonga eyethu Uluhlu lokufunda kwesi sihloko.
Kwiveki ephelile, Ilungelo laseMelika lokwazi ingxelo Isiteyitimenti esinefuthe kwiLancet esayinwe ngoososayensi abaziwayo abangama-27 malunga nemvelaphi yeSARS-CoV-2 ibiququzelelwe ngabasebenzi be-EcoHealth Alliance, iqela elingenzi nzuzo nelifumene izigidi zeedola kwinkxaso mali yomhlawuli werhafu waseMelika ukuze asebenzise i-coronaviruses yemfuza. kunye nososayensi kwiZiko laseWuhan leVirology (WIV).
The Ingxelo kaFebruwari 18 wagweba "iingcamango zobuqhetseba" ezibonisa ukuba i-COVID-19 inokuba ivela elabhoratri, kwaye yathi izazinzulu "zigqibe ngokugqwesileyo" intsholongwane evela kwizilwanyana zasendle. Iimeyile ezifunyenwe yi-USRTK Uveze ukuba uMongameli we-EcoHealth Alliance uPeter Daszak wayila le leta wayilungiselela “ukuthintela ukuvela kwengxelo yezopolitiko.”
I-Lancet ayiphumelelanga ukuveza ukuba abanye abantu abasayine le ngxelo banezikhundla kwi-EcoHealth Alliance, enegalelo kwezemali ekuphambukiseni imibuzo kude nokuba kungenzeka ukuba intsholongwane yavela elebhu.
Ngoku, iLancet ihambisa impembelelo ngakumbi kwiqela elinokungqubana komdla kumbuzo obalulekileyo wezempilo woluntu malunga nemvelaphi yesifo. Ngomhla kaNovemba 23, iLancet enegama elithi a ipaneli yamalungu ali-12 entsha kwiKhomishini yeLancet COVID 19. Usihlalo weqela elitsha lokuphanda "Imvelaphi, ukusasazeka kwangoko kwesifo, kunye nesisombululo esinye sezeMpilo kwizoyikiso zobhubhane zangomso" akekho omnye ngaphandle kukaPeter Daszak we-EcoHealth Alliance.
Isiqingatha seqela labasebenzi- kubandakanya iDaszak, iHume Field, uGerald Keusch, uSai Kit Lam, uStanley Perlman noLinda Saif - nabo babesayine ingxelo kaFebhuwari 18 abathi bayayazi imvelaphi yentsholongwane kwiveki nje engephi emva kweMpilo yeHlabathi. Umbutho ubhengeze ukuba isifo esibangelwe yinoveli yecoronavirus siyakuthiwa COVID-19.
Ngamanye amagama, ubuncinci isiqingatha somsebenzi weKhomishini ye-Lancet ye-COVID kwimvelaphi ye-SARS-CoV-2 ibonakala ngathi ibisele isigwebo kwangaphambili phambi kokuba uphando luqale. Oku kujongela phantsi ukuthembeka kunye negunya lomsebenzi.
Imvelaphi ye-SARS-CoV-2 yile iseyimfihlakalo kwaye uphando olucokisekileyo nolunokuthenjwa lungabaluleka ekuthinteleni ubhubhane olandelayo. Uluntu lufanelwe luphando olungangcoliswanga ziingxabano zomdla.
I-imeyile efunyenwe yi-US Right to Know ibonisa ukuba a ingxelo kwi Lancet Ababhali bezesayensi bezempilo abaziwayo be-27 begxeka "iingcamango zobuqhetseba ezibonisa ukuba i-COVID-19 ayinayo imvelaphi yendalo" yayiququzelelwe ngabasebenzi be-EcoHealth Alliance, iqela elingenzi nzuzo eliye ifumene izigidi zeedola of Umrhafi wase-US inkxaso mali yemfuza ilawule iintsholongwane ze-Corona kunye nososayensi kwi IZiko leNzululwazi yeWuhan.
Ii-imeyile ezifunyenwe ngezicelo zeerekhodi zoluntu zibonisa ukuba uMongameli we-EcoHealth Alliance uPeter Daszak wayila Lancet Isiteyitimenti, kwaye wayezimisele "Ingabonakali njengevela kumbutho omnye okanye umntu omnye" kodwa kunokuba kubonwe njenge “Ileta nje evela kwizazinzulu eziphambili”. UDaszak ubhale ukuba ufuna "ukunqanda ukuvela kwengxelo yezopolitiko".
Ileta yezazinzulu yavela Lancet Nge-18 kaFebruwari, kwiveki nje enye emva kokuba uMbutho wezeMpilo weHlabathi wabhengeza ukuba isifo esibangelwe yinoveli yecoronavirus sizakuthiwa yi COVID-19.
Ababhali abangama-27 “bazigxeka kabukhali iingcamango zelenqe ezibonisa ukuba i-COVID-19 ayinayo imvelaphi yendalo,” kwaye baxela ukuba oososayensi abavela kumazwe amaninzi "bagqiba kwelokuba le coronavirus yavela kwizilwanyana zasendle." Le leta ibingafakwanga izingqinisiso zesayensi zokuphikisa imvelaphi yeelebhu yentsholongwane. Isazinzulu esinye, uLinda Saif, ubuze nge-imeyile ukuba ingaba iya kuba luncedo "Ukongeza nje isitetimenti esinye okanye ezi-2 ukuxhasa ukuba kutheni i-NCOV ingeyiyo intsholongwane eyilebhu kwaye iyenzeka ngokwendalo? Kubonakala ngathi kubalulekile ukuphikisa inzululwazi ngamabango anje! ” UDaszak uphendule wathi, "Ndicinga ukuba kufanele ukuba sinamathele kwingxelo ebanzi. "
Ukukhula kweefowuni ukuphanda iZiko laseWuhan leVirology njengomthombo onokubakho weSARS-CoV-2 ukhokelele ukwanda koqwalaselo Umanyano lwe-EcoHealth. Ii-imeyile zibonisa indlela amalungu e-EcoHealth Alliance adlale ngayo indima yokuqala ekubunjweni kwemibuzo malunga nemvelaphi yeelebhu ze-SARS-CoV-2 njenge "iingcinga ezinqabileyo ekufuneka kujongwane nazo," njenge UDaszak uxelele Guardian.
Nangona ibinzana elithi "EcoHealth Alliance" livele kube kanye kuphela Lancet Isiteyitimenti, ngokunxulumana nombhali-mbhali uDaszak, abanye ababhali basebenzisana nabo banolwalamano oluthe ngqo kwiqela elingachazwanga njengongquzulwano lomdla. URita Colwell noJames Hughes banjalo amalungu yeBhodi yaBalawuli ye-EcoHealth Alliance, UWilliam Karesh nguSekela Mongameli oLawulayo weqela lezeMpilo noMgaqo-nkqubo, kwaye Intsimi yeHume nguMcebisi ngezeNzululwazi noMgaqo-nkqubo.
Ababhali beengxelo bakwathi "ukwabiwa ngokukhawuleza, okuvulekileyo nokungafihlisiyo kwedatha malunga noku kuqhambuka ngoku kusongelwa ngamahemuhemu kunye nolwazi olungelulo malunga nemvelaphi yalo." Namhlanje, nangona kunjalo, kuncinci okwaziwayo malunga nemvelaphi ye-SARS-CoV-2, kunye nophando kwimvelaphi yayo ngoku iWorld Health Organization kwaye Lancet Ikhomishini yeCoverV-19 ibe igutyungelwe yimfihlo kwaye zixutywe ngu ukungqubana kwemidla.
UPeter Daszak, uRita Colwell, kunye Lancet Umhleli uRichard Horton khange anike zinkcazo ukuphendula izicelo zethu zeli bali.
Ikhonkco kwibhetshi iphela ye-EcoHealth Alliance ye-imeyile inokufumaneka apha: I-imeyile ye-EcoHealth Alliance: kwiDyunivesithi yaseMaryland (Iphepha le-466)
Indalo kunye ne-PLoS Iintsholongwane zibonakalisa ubunyani besayensi kwizifundo eziphambili zokudibanisa i-pangolin coronaviruses kwimvelaphi ye-SARS-CoV-2
Bhalisa ku fumana uhlaziyo kwiBhlogazards Blog.
Apha, sinika ii-imeyile zethu ngababhali abaphezulu be- Liu okqhubekayo. kwaye Xiao okqhubekayo., kunye nabahleli be Izifo ze-PLoS kwaye indalo. Sikwazisa nengxoxo enzulu yemibuzo kunye neenkxalabo eziphakanyiswe zezi imeyile, ezibeka ukuthandabuza ubunyani bezi zifundo ziphambili ngemvelaphi yenoveli coronavirus SARS-CoV-2 ebangela i-COVID-19. Bona ingxelo yethu kwezi imeyile, Ukunyaniseka kwezifundo eziphambili kwimvelaphi yecoronavirus ngokungathandabuzekiyo; Ijenali zesayensi eziphanda (11.9.20)
Unxibelelwano nge-imeyile noGqirha Jinping Chen, Umbhali omkhulu kaLiu et al:
Ii-imeyile zikaGqirha Jinping Chen ziphakamisa inkxalabo kunye nemibuzo.
1- Liu okqhubekayo. (2020) bahlanganisa ngokulandelelana kwabo ipangolin coronavirus genome ulandelelwano olusekwe kwii-coronaviruses ezisampuliweyo kwii-pangolin ezintathu, iisampulu ezimbini ezivela kwibhetshi ehanjiswe ngokungekho mthethweni ngo-Matshi 2019, kunye nesampulu enye evela kwibhetshi eyahlukileyo eyabanjwa ngoJulayi 2019. , apho izazinzulu zifuneka ukuba zifake idatha yolandelelwano ukuqinisekisa ukungqinisisa okuzimeleyo kunye nokuzala kwakhona kweziphumo ezipapashiweyo, eziqulathe idatha yolondolozo yokufunda (SRA) ngokulandelelana kweesampulu ezimbini zika-Matshi 2019 kodwa ilahlekile kwidatha kaJulayi 2019. Emva kokubuzwa ngale sampulu ilahlekileyo, ethi uGqirha Jinping Chen ayichaze njenge-F9, uGqirha Jinping Chen wathi: “Idatha eluhlaza yezi sampuli zintathu inokufunyanwa phantsi kwenombolo ye-NCBI ye-PRJNA573298, kunye ne-BioSample ID yayingu-SAMN12809952, SAMN12809953, kunye SAMN12809954, ngaphezu koko, umntu ngamnye (F9) ovela kwibhetshi eyahlukileyo wayenethemba, idatha eluhlaza inokubonwa kwi-NCBI SRA SUB 7661929, eziza kukhutshwa kungekudala ngokuba sinenye i-MS (iphantsi koqwalaselo)”(Ugxininiso lwethu).
Imalunga nelo Liu et al. khange bapapashe idatha engqinelana ne-1 yee-3 zee-pangolins iisampulu abazisebenzisileyo ukudibanisa ukulandelelana kwazo kwe-pangolin coronavirus genome. UGqirha Jinping Chen naye khange abelane ngale datha xa ebuzwa. Isiqhelo kwisayensi kukupapasha kunye / okanye nokwabelana ngedatha eya kuvumela abanye ukuba baqinisekise ngokuzimeleyo kwaye bavelise iziphumo. Ingaba wenze kanjani Izifo ze-PLoS Vumela uLiu et al. ukuphepha ukupapasha idatha yesampulu ebalulekileyo? Kutheni le nto uGqirha Jinping Chen engabelani ngedatha emalunga nesampulu yesithathu yepangolin? Kutheni uLiu et al. Ngaba ufuna ukukhupha idatha engashicilelwanga emalunga nale sampuli yesithathu yepangolin njengenxalenye yesifundo esingeniswe kwiphephancwadi elahlukileyo? Inkxalabo apha yeyokuba izazinzulu ziya kunika gwenxa isampulu yepangolin elahlekileyo evela kuLiu et al. Kwisifundo esahlukileyo, okwenza kube nzima kwabanye ukuba emva koko balandele iinkcukacha ezibalulekileyo malunga nesampulu yepangolin, njengomxholo apho isampulu yepangolin yayiqokelelwa khona.
UGqirha uJinping Chen uyiphikile into yokuba uLiu et al. ndibenolwalamano noXiao et al.'s (2) indalo ukufunda. Ubhale wathi: "Singenise iphepha lethu le-PLOS Pathogens ngoFebruwari 14, 2020 phambi kwephepha leNdalo (Isalathiso 12 kwiphepha lethu le-PLOS pathogens, bangenise ngoFebruwari 16, 2020 ukusukela kumhla wokungeniswa kwabo kwiNdalo), iphepha lethu lezifo ze-PLOS chaza ukuba i-SARS-Cov-2 ayiveli kwipangolin coronavirus ngqo kwaye ipangolin ayingombamkeli ophakathi. Sasiwazi umsebenzi wabo emva kwengcaciso yeendaba zabo ngoFebruwari 7, 2020, kwaye sinezimvo ezahlukileyo kunye nabo, amanye amaphepha amabini (iiVirus kunye neNdalo) adwelisiwe kwiphepha le-PLOS Pathogen njengamaphepha esalathiso (inombolo yesalathiso ye-10 kunye ne-12), singamaqela ophando ahlukeneyo kubabhali bephepha leNdalo, kwaye akukho buhlobo phakathi kwabo, yaye sithathe iisampulu ngolwazi olunenkcukacha zesampula kwiziko lokuhlangula lezilwanyana zasendle laseGuangdong ngoncedo oluvela kuJiejian Zou kunye noFanghui Hou njengababhali bethu kwaye asazi ukuba iisampulu zephepha leNdalo zivela phi. ” (ukunyanzeliswa kwethu)
La manqaku alandelayo aphakamisa ukuthandabuza malunga nezimangalo zikaGqirha Chen ngasentla:
Liu okqhubekayo. (2020), Xiao et al (2020) kunye noLiu et al. (2019) babelane ngababhali abalandelayo: UPing Liu noJinping Chen babengababhali kwi2019 Iintsholongwane iphepha kunye ne2020 Izifo ze-PLoS iphepha, umbhali omkhulu uWu Chen kwiXiao et al. (2020) wayengumbhali-mbhali we2019 Iintsholongwane iphepha, kunye noJiejian Zhou kunye noFanghui Hou babengababhali kuzo zombini iXiao et al. kunye noLiu et al.
Zombini ezi mibhalo zibhaliweyo zafakwa kwiseva yoshicilelo loluntu bioRxiv ngomhla ofanayo: ngoFebruwari 20, 2020.
c Xiao okqhubekayo. “Iisampulu zepangolin ezinikwe igama kwakhona zapapashwa okokuqala nguLiu et al.  Iintsholongwane ngaphandle kokukhankanya isifundo sabo njengenqaku lokuqala elichaze ezi iisampulu, kwaye basebenzise idatha ye-metagenomic kwezi sampuli kuhlalutyo lwabo "(UChan noZhan).
Liu et al. pangolin coronavirus genome epheleleyo 99.95% efanayo kwinqanaba le-nucleotide ukuya kwi-pangolin coronavirus genome epheleleyo epapashwe ngu-Xiao et al. Angakwazi njani uLiu et al. Ndivelise i-genome epheleleyo eyi-99.95% efanayo (kuphela ~ 15 ye-nucleotides umahluko) kuXiao et al. ngaphandle kokwabelana ngedatha kunye nohlalutyo?
Xa amaqela ophando ohlukeneyo ngokuzimeleyo efika kwiiseti ezifanayo zesigqibo malunga nombuzo onikiweyo wophando, oko kukonyusa ukubakho kwenyani yamabango abandakanyekayo. Inkxalabo apha kukuba uLiu et al. kunye noXiao et al. khange kwenziwe ngokuzimeleyo kwizifundo njengoko kufunwa nguGqirha Chen. Ngaba kukho naluphi na unxibelelwano phakathi kukaLiu et al. kunye noXiao et al. ngokubhekisele kuhlalutyo lwabo nakupapasho? Ukuba kunjalo, lwalungakanani kwaye lwalunjani olo nxibelelaniso?
Kutheni le nto uLiu et al. ayenzi ukuba ifumaneke esidlangalaleni idatha eluhlaza yokulandelelanisa i-amplicon ababeyisebenzisa ukudibanisa i-pangolin coronavirus genome? Ngaphandle kwale datha eluhlaza, i-pangolin coronavirus genome ehlanganiswe ngu-Liu et al., Abanye abanakuzimela ngokuzimeleyo kwaye bavelise iziphumo zika-Liu et al. Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, into eqhelekileyo kwinzululwazi kukupapasha kunye / okanye nokwabelana ngayo yonke idatha enokuvumela abanye ukuba baqinisekise ngokuzimeleyo kwaye bavelise iziphumo. Sacela uGqirha uJingping Chen ukuba abelane ngeLiu et al. Idatha eluhlaza yokulandelelana kwe-amplicon. Uphendule ngokwabelana no-Liu et al. Iziphumo ze-RT-PCR zokulandelelana kwemveliso, ezingezizo idatha ye-amplicon eluhlaza esetyenziselwa ukudibanisa i-pangolin coronavirus genome. Kutheni uGqirha Jinping Chen emathandabuzo ukukhupha idatha eluhlaza eya kuvumela abanye ukuba baqinisekise ngokuzimeleyo Uhlalutyo lukaLiu et al.
4- Liu okqhubekayo. Iintsholongwane (2019) yapapashwa ngo-Okthobha u-2019 kwaye ababhali bayo babeyifakile i-pangolin coronavirus (ngokulandelelana funda ugcino) idatha ye-SRA kunye ne-NCBI ngoSeptemba 23, 2019, kodwa ndalinda de January 22, 2020 ukwenza le datha ifikeleleke esidlangalaleni. Izazinzulu zihlala zikhupha idatha eluhlaza yokulandelelana kwe-genomic kulwazi olufikeleleka esidlangalaleni ngokukhawuleza emva kokupapashwa kwezifundo zabo. Esi senzo siqinisekisa ukuba abanye banokufikelela ngokuzimeleyo, baqinisekise kwaye basebenzise idatha. Kutheni le nto uLiu et al. 2019 linda iinyanga ezi-4 ukwenza idatha yabo ye-SRA ifikeleleke esidlangalaleni? UGqirha Jinping Chen ukhethe ukungawuphenduli ngokuthe ngqo lo mbuzo wethu kwimpendulo yakhe ngo-Novemba ngo-9, 2020.
Saye sanxibelelana noGqirha Stanley Perlman, Izifo ze-PLoS Umhleli kaLiu et al. kwaye yile nto ebefanele ukuyithetha.
Ngokukodwa, uGqirha Perlman uvumile ukuba:
"I-PLoS Pathogens iphanda eli phepha ngokweenkcukacha"
Akazange "aqinisekise ubunyani besampulu kaJulayi 2019 ngexesha lokuphononongwa kwangaphambili koontanga"
“[C] ii-oncerns malunga nokufana phakathi kwezi zifundo zibini [Liu et al. noXiao et al.] zavela kuphela emva kokupapashwa kwezi zifundo zombini. ”
Akakhange abone nayiphi na idatha ye-amplicon ngexesha lokuphononongwa koontanga. Ababhali banikezele ngenombolo yokungena kwi-genome ehlanganisiweyo… nangona emva kokupapashwa kuye kwavela ukuba inombolo yokungena edweliswe kwiNgxelo yokuFumaneka kweDatha ayichanekanga. Impazamo kunye nemibuzo ejikeleze idatha eluhlaza yokulandelelana kokulungiswa okwangoku kuyaphendulwa njengenxalenye yetyala lasemva kokupapashwa. ”
Xa saqhagamshelana Izifo ze-PLoS neenkxalabo zethu malunga noLiu et al. sikufumene oku kulandelayo Impendulo evela kuMhleli oPhezulu weqela leenqobo ezisisiseko zokupapasha iPLoS:
Iileta ezivela kwiXiao et al.
Ngo-Okthobha i-28, i Umhleli oyiNtloko weSayensi yezebhayoloji indalo uphendule (ngezantsi) ngebinzana eliphambili "siyithatha le micimbi nzulu kwaye siya kuwujonga lo mbandela uwuphakamisa apha ngezantsi ngononophelo olukhulu."
Nge-30 ka-Okthobha, uXiao et al. ekugqibeleni ikhutshwe esidlangalaleni idatha yabo yokulandelelana kwe-amplicon eluhlaza. Nangona kunjalo, njengopapasho lwesi siqwenga, idatha yolandelelwano lwe-amplicon engeniswe nguXiao et al. ilahlekile ezona fayile zedatha eluhlaza ezinokuvumela abanye ukuba bahlangane kwaye baqinisekise ukulandelelana kwazo kwepangolin coronavirus genome.
Imibuzo ebalulekileyo isasele efuna ukuqwalaselwa:
Ngaba i-pangolin coronaviruses iyinyani? Isihloko se Umzobo 1e kwiXiao et al. Ithi: “Amasuntswana entsholongwane abonwa kwizicwili ezinamalungu amabini kumfanekiso osasaza i-electron microscopy ethathwe kwiseli yeseli yeVero E6 efakwe isitya esinamandla esingaphezulu kwethishu yamaphaphu evela kwipangolin enye, ne-morphology ebonisa i-coronavirus.” Ukuba uXiao et al. yodwa i-pangolin coronavirus, ngaba bangabelana ngesampulu yentsholongwane kunye nabaphandi abangaphandle kwe China? Oku kunokuhamba indlela ende ekuqinisekiseni ukuba le ntsholongwane ikhona kwaye ivela kwizicwili zepangolin.
Kwangoko ngo-2020, okanye ngo-2019 Liu okqhubekayo., Xiao okqhubekayo., Lam kunye al. kwaye UZhang et al. bayazi ukuba bazakupapasha iziphumo ngokusekwe kwidathasethi efanayo?
a. Ngaba bekukho naluphi na ulungelelwaniso kuthathelwa ingqalelo ukuba enye yashicilelwa ngo-Februwari 18 kwaye ezintathu zanyulwa kwangaphambili ngo-Februwari 20?
b. Kutheni le nto uLiu et al. (2019) abenzi ukulandelelana kwabo kufunde idatha yogcino ifikeleleke esidlangalaleni ngomhla ababeyifaka kwiziko ledatha leNCBI? Kutheni le nto belinde kude kube nge-22 kaJanuwari ngo-2020 ukwenza le pangolin coronavirus yokulandelelana kwedatha esidlangalaleni.
c. Phambi kukaLiu et al. 2019 Iintsholongwane idatha ikhutshwe kwi-NCBI ngoJanuwari 22, 2020, ngaba le datha yayifikeleleka kwabanye abaphandi e-China? Ukuba kunjalo, yeyiphi idathabheyisi eyayiyipangolin coronavirus yokulandelelana kwedatha egcinwe kuyo, ngubani owayenokufikelela, kwaye yafakwa nini idatha yenziwa yafikeleleka?
Ngaba ababhali bazakusebenzisana nophando oluzimeleyo lokulandela umkhondo wezi sampuli zepangolin ukubona ukuba ezinye iintsholongwane ezifana ne-SARS-CoV-2-ezinje ngezo zingafunyanwa ngo-Matshi ukuya ku-Julayi 2019 iibhetshi zezilwanyana ezifihliweyo- ezinokubakho njengeesampulu ezibandayo okanye usaphila eGuangdong Wildlife Rescue Centre?
Ngaba ababhali bazakusebenzisana nophando oluzimeleyo ukubona ukuba abathubelezisi (ngaba bavalelwa?
Wamkelekile kwiBhlogazards Blog
NgoJulayi 2020, i-US Right to Know yaqala ukungenisa izicelo zerekhodi zikarhulumente ekufuneni idatha evela kumaziko oluntu kumzamo wokufumanisa into eyaziwayo malunga nemvelaphi yenoveli coronavirus SARS-CoV-2, ebangela isifo Covid-19. Siphanda ngeengozi, ukuvuza kunye nokunye ukwenzakala kwiilebhu apho kugcinwa khona izifo ezinokubangela ubhubhane kwaye ziguqulwe, kunye nemingcipheko yezempilo yophando lwe-gain-of-function (GOF), ebandakanya ukuvavanywa kwezi ntsholongwane ukwandisa uluhlu lwazo, ukuhanjiswa okanye ukubulala.
Kule bhlog, siza kuthumela uhlaziyo kumaxwebhu esiwafumanayo kunye nolunye uphuhliso kuphando lwethu.
I-US Ilungelo lokwazi yi iqela lophando kugxilwe ekukhuthazeni ukungafihli kwempilo yoluntu. Sisebenza kwihlabathi liphela ukubhengeza ukungalunganga komdibaniso kunye nokusilela kukarhulumente okugrogrisa ukuthembeka kwenkqubo yethu yokutya, okusingqongileyo kunye nempilo yethu. Ukusukela ngo-2015, thina ufumene, thunyelwa kwi-intanethi kwaye ixelwe kumawakawaka oshishino kunye namaxwebhu aseburhulumenteni, kubandakanya amaninzi afunyenwe ngokunyanzelwa komthetho kwemithetho yeerekhodi evulekileyo.
Uphando lwethu kwii-biohazards lukhokelwa nguSainath Suryanarayanan, Ph.D. Idilesi ye-imeyile sainath@usrtk.org.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nophando lwethu lwe-biohazards, nceda ubone:
Ukufundwa ngasemva: Ngaba i-SARS-CoV-2 yavela kwiLebhu? Zeziphi iingozi zoPhando lwe-Gain-of-Function? (10.13.20)
Kutheni siphanda ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2, iilebhu ezikhuselekileyo kunye nophando lwe-GOF (10.13.20)
Upapasho ndaba zekhampani: Ilungelo lase-US lokwazi ii-NIH zamaXwebhu malunga neMvelaphi ye-SARS-CoV-2 (11.5.20)